Fanambarana faktiora - Micro-Semiconductor.com
Fampahalalana momba ny faktiora:
Ry mpampiasa rehetra malala, hahazo ny faktiora ara-barotra ofisialy izahay rehefa avy mividy amin'ny Micro-Semiconductor.com, azafady vakio tsara ny torolalana eto ambany.
1, torolàlana momba ny faktiora navoaka
Hivoaka avy amin'ny Micro-Semiconductor.com ny faktiora. Ny sandan'ny faktiora dia miankina amin'ny habetsaky ny vola naloanao.
Micro-Semiconductor.com dia manome karazana faktiora roa, faktiora VAT (tsy azo alefa) ary faktiora manokana VAT (Azo esorina).
Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy hialana amin'ny fiverenana dia hiverina ny faktiora afaka 5 andro fiasana aorian'ny nahazoan'ny mpanjifa entana.
Azafady fenoy ny adiresy adiresy, olona mifandraisa, nomeraon-telefaona mba hahazoana antoka fa azo alefa tsara ny faktiora. Raha tsy fenonao ireto fampahalalana ireto dia handefa faktiora amin'ny adiresy mitovy amin'ny entana nalefa ny Micro-Semiconductor.com, mba hahafahanay mifandray aminao ara-potoana.
2, faktiora VAT
Matetika ny Micro-Semiconductor.com dia manome faktiora VAT ho an'ireo mpampiasa izay tsy mpandoa hetra amin'ny ankapobeny.
Azafady soraty ny anaran'ny orinasa sy ny mombamomba ny hetra ao anatin'ny faktiora.
Raha mila mamoaka "faktiora manokana VAT" ianao, mifandraisa azafady ny kaontinay, raha tsy izany dia hamoaka faktiora VAT ny rafitry ny Micro-Semiconductor.com.
Fenoy ary fenoy tsara ny momba ny faktiora rehetra momba ny faktiora, tsy handray andraikitra ny Micro-Semiconductor.com raha misy lesoka.
Ny faktiora manokana an'ny VAT dia halefa amin'ny express aorian'ny fanamafisanao ny fandefasana azy.
Azafady fenoy ny anaran'ny orinasa, adiresy, nomeraon-telefaona, nomeraon-ketra, anaran'ny banky ary kaonty, adiresy fandefasana faktiora mba hahafahan'ny mpampiasa mampiasa faktiora manokana VAT amin'ny ara-dalàna, saingy ny fampahalalana feno rehetra dia tsy maintsy hitovy amin'ny fandoavan-ketra.
Ny anaran'ny orinasa dia tsy maintsy anaran'ny fisoratana anarana indostrialy sy ara-barotra.
Ny adiresin'ny orinasa sy ny nomeraon-telefaona faktiora dia tsy maintsy mitovy amin'ny mombamomba ny orinasanao.
Nomera fisoratana anarana momba ny hetra no isan'ny <>, Isa 15 mazàna, mba zahao tsara ary ampidiro.
Ny anaran'ny banky sy ny nomeraon'ny kaonty dia tsy maintsy soratana, ho azy roa ireo.
Raha manoratra fampahalalana diso momba ny faktiora manokana VAT ny mpampiasa dia hamoaka ho azy ny faktiora VAT ho azy ny Micro-Semiconductor.com, ary tsy hiverina intsony.
Tsy hanaiky ny fangatahana fakana faktiora manokana VAT ny Micro-Semiconductor.com, raha efa namoaka faktiora arakaraka ny mombamomba ny mpampiasa izahay.
5, fampahatsiahivana am-pirahalahiana
Raha manana fisalasalana momba ny faktiora navoaka ianao dia mifandraisa amin'ny departemanta ara-bola Micro-Semiconductor.com.
Raha tsy mahazo faktiora mandritra ny 30 andro aorian'ny nahazoanao entana, dia mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa Micro-Semiconductor.com. Tsy hamoaka faktiora fanindroany izahay raha tsy afaka mifandray aminay afaka 90 andro (hatramin'ny daty nanafarana)
Ny anaran'ny vokatra ao amin'ny faktiora dia ny fanoratana Components elektronika, ny isan'ny ampahany dia hosoratana ho tena filaharana, tsy misy fangatahana manokana hafa.
6, fiverenan'ny faktiora
Azafady mba mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika raha hitanao fa tsy marina ny fampahalalana faktiora araky ny baiko, ny Micro-Semiconductor.com dia hisolo ary handefa ireo izay marina.
Azafady mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika raha te hanova ny fampahalalana faktiora ianao dia handefa faktiora nohavaozina ho any amin'ny adiresinao voalaza taorian'ny nanamafisan'ny sampana ara-bola anay.
Raha tsy misy ny fankatoavan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia tsy hanaiky ny fangatahana faktiora navoaka indray ny departemanta ara-bola avy amin'ny telefaona, fax, mailaka.